Idozi mmanu mmanu cannabis na Idaho nwere ike pụta site na ọnọdụ akwụkwụ na-adịghị ahụkebe nke Alexis Carey dị afọ 10 - Ugwu ahụ 2022
Idozi mmanu mmanu cannabis na Idaho nwere ike pụta site na ọnọdụ akwụkwụ na-adịghị ahụkebe nke Alexis Carey dị afọ 10
Iwu Idaho na-amachibido iwu wii wii maka ebumnuche ọgwụ. Agbanyeghị, ọgụ nwata nwanyị dị afọ 10 nwere ụdị ọrịa akwụkwụ na-adịghị ahụkebe nwere ike ime ka steeti gbanwee ọnọdụ ya na iji mmanụ ewepụtara na cannabis gwọọ ọnọdụ ụfọdụ. Alexis Carey malitere inwe nhụsianya mgbe ọ dị ọnwa 2 ma chọpụta na ọ bụ Dravet syndrome mgbe ọ dị afọ 2. Ugbu a, ezinụlọ Alexis na-atụ anya na ha nwere ike iji ụzọ ọ bụla nke ọgwụgwọ nwere ike isi mee ihe tupu otu n'ime njide ya na-atụghị anya ya na-egbu egbu.
Nne Alexis, Clare Carey gwara ndị Associated Press, "Nne na nna na nne na nna, mgbe ịnọ n'obere obodo yana mmadụ 10 ị maara na ha niile na-enwe ihe ịga nke ọma, nke ahụ abụghịzị akụkọ. "Nke ahụ bụ olileanya. Dị ka nne ma ọ bụ nna ọ bụla, ọ dịghị mgbe ị kwụsịrị inwe olileanya na ị nwere ike nweta njikwa njide zuru oke. Ụmụaka na-anwụ site na Dravet site na nke ọ bụla n'ime ọdịdọ ahụ. Alexis nwere ike ịnwe njide nke nwere ike ọ gaghị akwụsị. Anyị amaghị n'ezie."
Dị ka Epilepsy Foundation si kwuo, ọrịa Dravet bụ ọrịa mkpụrụ ndụ akwụkwụ na-adịghị ahụkebe nke ụbụrụ na-amalite na nwata mana ọ na-adị ogologo ndụ. Ọdọkpụ, nke na-amalite n'ime afọ mbụ nke ndụ onye ọrịa, nwere ike ịdịru ihe karịrị nkeji abụọ ma nwee ike ịkpata ọnọdụ epilepticus, ọnọdụ nwere ike ịnwụ nke ọdịdọ na-adịru ogologo oge karịa 30 nkeji. A na-ejikarị ngwakọta ọgwụ na nri pụrụ iche na-agwọ ndị nwere Dravet. N'ụzọ dị mwute, ọgwụ ọdịdọ nwere ike ịgwọ ụfọdụ ụdị ọdịdọ, na Dravet na-ebute ọtụtụ ụdị ọdịdọ.
Ọtụtụ ndị nwere Dravet bụ ndị a na-achọpụtahieghị, ebe ọ bụ na ụmụ ọhụrụ na-enwekarị ọganihu nkịtị n'oge ọdịdọ ha malitere, dị ka ọ dị Alexis. Nnwale MRI na EEG na-apụtakwa ihe nkịtị n'oge nwata. Ndị dọkịta nwere ike ịchọpụta Alexis na Davet mgbe ọ dị afọ 2 mgbe ọ kwụsịrị ikwu okwu na ịchịkwa eriri afọ ya. Taa mgbe ọ dị afọ 10, Alexis chọrọ nlekọta mgbe niile, nke gụnyere enyemaka na-aga elu na steepụ. Ndị mụrụ ya ga-ekewakwa oge ka ha na ya na-ehi ụra kwa abalị iji hụ na otu n'ime ihe ọdịdọ ya n'abalị agaghị egbu egbu.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ gara aga, ezinụlọ Alexis malitere nyocha ụmụaka ndị ọzọ nwere ọrịa akwụkwụ bụ́ ndị a na-eji mmanụ e amịpụtara na wii wii eme ihe. Cannabidiol, ihe nke abụọ na-arụ ọrụ nke wii wii, na-emepụta mmetụta ọgwụ a chọrọ, gụnyere mgbochi mkpali, mgbochi mgbu, mgbochi nchegbu, mgbochi uche, na mgbochi spasm, ma ọ dịghị ewepụta psychoactive "elu" dị ka wii wii isi ihe na-arụ ọrụ mgwa ihe., THC. Ihe akaebe egosila na mmanụ cannabidiol na-arụ ọrụ nke ọma n'ibelata ọnụ ọgụgụ, ogologo, na oke ọdịdọ na ụmụaka.
Laa azụ na February 2014, Phillip M. Gattone, onye isi oche na onye isi oche nke Epilepsy Foundation, na Warren Lammert, onye isi oche nke Epilepsy Foundation Board of Directors, wepụtara nkwupụta na-akpọ maka njedebe nke mmachi DEA nke na-egbochi ule ụlọ ọgwụ na nyocha gbasara wii wii ọgwụ. dịka ọgwụgwọ akwụkwụ. Enwere nde ndị America 2.3 ugbu a na-arịa ọrịa akwụkwụ, ihe karịrị otu nde n'ime ha na-enwe ọdịdọ a na-achịkwaghị achịkwa. Dị ka nkwupụta si kwuo:
"Epilepsy Foundation na-akwado ikike nke ndị ọrịa na ezinụlọ ndị nwere ọdịdọ na Akwụkwụ na-enweta inweta nlekọta dọkịta na-eduzi, gụnyere wii wii ọgwụ."